“Nuti Otuu Jirruu, Akkamiin Dhabamaa? | QEERROO
“Nuti Otuu Jirruu, Akkamiin Dhabamaa?
(Qeerroo, Finfinnee, 11 Waxabajjii 2011) Sabni tokko kan ofi danda’ee, ummata baay’ee qabu qabsoo gamtaadhaan garbummaa jalaa akka bahu weellisaa ANGAFAA fi beekamaa Afandii Siyyoo Faaruu Warraaqsaa Qeerroof erge keessatti hubachiise.
Wellisaa Afandii Siyyoo faaruu haaraa Qeerroo Oromiyaaf qindeesse keessatti akka hubachiisetti sabni Oromoo kan dhaloota sabboonoo fi kutatoo kitilaan qabu ba’aa garbummaa baatee jiraatuun salphina guddaa dha.
Walaloo faaruu “garbummaa irra jirraa, roorroodhaan saamamnee,..” jedhee eegalu keessatti akka welluu isaatiin qindeessee miiressetti xiqqaa guddaan keenya karayyuu marsinee diinatti yoo kaane abbaa injifannoo ta’uun hin mamsiisu.
” Nuti Otuu Jirruu, Akkamiin Dhabamaa?” jedhee gaaffii seena qabeessa kan gaafate Artisti Afandii Siyyoo, deebii isaas, “Nuti saba tokkoo, wajjiniin qabsoofnee, wajjiniin rakkannee bilisummaatti haa baanu,” jechuun furmaata isaas welluu isaa kana keessatti akeekee jira.
“Waliin Qabsoo Goonee, Irraa baana Rakkoo”
Artisti Afandii Siyyoo seenaa qabsoo warraaqsa Oromoo keessatti wallee warraaqsaa kan akka Baallee Guchii fi Alaabaa Oromiyaa fa’aa weellisuun qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa olaanaatti akka tarkaanfatu gahee mul’ataa gumaachaa jira.
Kana malees, yeroo addaddaatti walleen Oromoo sadarkaa addunyaatti akka beekamu gahee olaanaa bahuun faandhahii dhaloota haaraa ta’ee akka jiru hubachuun kan danda’amuu dha.
Yeroo ammaas bu’aa bubbutuun otuu hin malalfamiin qabsoo oromoo jabeessuu fi tumsuun gahee ogummaa kan sadarkaa guddaatti mul’atu bahaa jira. Dhiyeenyattis Faaruu Qeerroo qopheessuun hojiin boonsaa diddaa Qeerroo Bilisummaa tumsuu fi gootomsu gumaachee jira.
Kanumaan wal qabatee, gara fuulduraattis hojii muuziqaatiin qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuuf kutannoo hin daddaaqamnee fi jabaa akka qabu dhaamsa nuu dabarse keessatti mirkaneessee jira.
2 thoughts on ““Nuti Otuu Jirruu, Akkamiin Dhabamaa?”
john on June 14, 2011 at 2:59 am said:
waan hundumaa irra kan nama baasuu mudhii hidhatanii tokkummaan jabachuu dha
Fincilaa on June 15, 2011 at 5:38 pm said:
let’s not be fools! I don’t think that even the OPDO-Oromo like Aster Mamo are anti-Oromia. Let them do their job in their style/way. We like it or not, our mindset (the OLF) is moving in five directions towards the same kaayyoo of bilisummaa Oromo and walabummaa Oromia:
So, dear Oromo brothers and sisters, our struggle is only vertical against the Woyane (against the current Abyssinian colonizers/dominators), not necessarily horizontal against each other (not a fight of UDJ vs OPDO vs OFC vs ULFO vs AFD, because of the mere fact that all of them are lead by our mindest, by the OLF)!